Blog - Sidee loo nadiifiyaa baarkooda beenta ah? Habka koowaad!
Had iyo jeer nadaafadaada faux nadiif ha ahaadaan oo waqtiga ugu dheeree!
Maxaan u nadiifinaynaa baarkooda beenta ah?
Baarkooda been-abuurka ah mararka qaarkood wuxuu noqon karaa mid aad u qiimo badan, markaa waxaad u baahan kartaa inaad awood u yeelato inaad isticmaasho wax ka badan hal jeer. Sida indhashareerka beenta ah ee 'Felvik Beenta', badanaa waxay awood u leedahay inay adeegsato ilaa 20-25 jeer haddii ay la socoto maareyn habboon. Haddii aad rabto inaad dib u isticmaasho jeedalkaaga, waxaad haysataa fursado kala duwan. Karbaashka waxaad ku nadiifin kartaa suuf ama Q-caarad. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa fiiq-fiiqyo iyo weel caag ah oo lagu buuxiyo waxyaabaha qarxa si aad tartiib tartiib ah u nadiifiso jeedallada. Markaad dhamaysid, ku keydi jeedallada beenta ah meel qabow oo qalalan ama weel.
Sidee loo nadiifiyaa baarkooda beenta ah?
Tallaabada 1: Diyaarso qalabkaaga
Kahor intaadan bilaabin nadiifinta baarkooda beenta ah, soo aruuri qalabka si aad sidaas u sameyso. Si aad si sax ah oo hufan u sameyso, waxaad u baahan doontaa waxyaabaha soo socda:
Farsameeyaha qurxinta, oo si gaar ah loogu talagalay in laga saaro qurxinta indhaha
Kubadaha suufka ah
Suufka suufka / Q-caarada
Adeegsiga Weelka Balaastikada ah
Tallaabada 2: Dhaq gacmahaaga
Marka horeba, ku dhaq gacmahaaga biyo qasabad nadiif ah iyo saabuun lidka ku ah bakteeriyada. Aad ayey muhiim u tahay inaad ku dhagto tillaabadan oo aad nadaafadda gacmaheena. Ma dooneysid inaad ku wareejisid baarkooda been abuurka ah gacmo wasakh ah, maxaa yeelay tani waxay sababi kartaa caabuq indhaha ah waxayna noqon kartaa mid aad u daran.
Gacmahaaga ku qoy biyo nadiif ah oo socda. Ku ururi gacmahaaga saabuunta bakteeriyada ilaa 20 ilbiriqsi. Hubso inaad bartilmaameed ka dhigatid meelaha u dhexeeya faraha, dhabarka gacmahaaga, iyo ciddiyaha.
Ku luqluqo gacmaha biyo saafi ah ka dibna ku qallaji tuwaal nadiif ah.
Tallaabada 3: Ka saar jeedalladaada beenta ah.
Ku dhaji mashiinka 'makeup makeup' si aad u baabi'iso xabagta. Hoos ugu cadaadi daboolkaaga hal farood oo si tartiib ah kor ugu qaad il-wareerka kan kale. U isticmaal suufka farahaaga ama cows-mareenkaaga cidiyahaaga.
Si adag ugu dhaji baarkooda suulkaaga iyo fartaada.
Fiiq faashadda gudaha si tartiib ah. Jeedalku waa inuu si fudud uga soo baxaa.
Ha isticmaalin waxyaabaha lagu qurxiyo saliida marka aad xiraysid baarkooda been abuurka ah.
Tallaabada 4: Ku qoy kubbado cudbi ah waxyaabaha lagu qurxiyo (ama Felvik Eyelash Remover) oo ku xoq mariinka jeedalka beenta ah.
Qaado suuf. Ku qoy qaar ka mid ah masaxa qurxinta ama Felvik Eyelash Remover. Ku dhaqdhaqaaq suufka adiga oo adeegsanaya jeedallada been abuurka ah ee dhaqdhaqaaqa dabacsan. Kaadi suufka min caarada jeedalka ilaa dhammaadka jeedallada, adoo hubinaya inaad sidoo kale hesho xarigga dhejiska. Sii soco ilaa inta qurxinta iyo kooladu dhammaanayaan.
Tallaabada 5: Ku celi dhinaca ka soo horjeedka jeedallada.
Dari baalasha beena. Soo qaado cudbi cusub oo cudbi ah kuna qoy mashiinka wax lagu qurxiyo ama Felvik Beenta Feejignaanta Beenta ah. Kadib, ku celi habka dhaqaaqa suufka dhinaca kale ee baarkooda. Mar labaad, ka dhaqaaq xagga sare ee daboolka ilaa caarada. Hubso inaad ku baddashid suufka faashadda dhejiska. Hubso in dhammaan qurxinta laga saaray.
Tallaabada 6: Isticmaal tweeyeyaal si aad uga saarto wax kasta oo xabagta ah.
Badanaa waxaa jiri doona xoogaa xabag ah oo ku dhegsan qaybta daboolka. Waxaad u adeegsan kartaa tuubbada si aad uga saarto.
Ka hubi khariidadda wixii koollo ah ee haray. Haddii aad hesho xabag, qaado tuwaaladahaaga. Hal gacan, ku dheji koollada leh tuubbooyinka. Gacanta kale, ku qabo baarkooda baalalka farahaaga.
Hubso inaad ku jiidato oo keliya tuubbooyinka. Jiididda jeedalka waxay dhaawici kartaa baarkooda been abuurka ah.
Tallaabada 7: Suuf cusub oo cudbi ah ku maydh qashinka aalkolada oo tirtir qallalka uumiga.
Waxaad dooneysaa inaad hubiso inaad heysatid wax xabagta ah oo kuu haray ama qurxiyo ka sameysmada qashinka. Dheji suufkaaga suufka aalkolada ku xoq oo ku masax mashiinka dusha. Ka-saarista koolada ka sokow, tani waxay dishaa jeermiska si aad si badbaado leh ugu isticmaali karto baarkooda markale.